Lionel Messi oo ka hadlay cashada Qarniga ee la filayo inuu la qaato Cristiano Ronaldo – Gool FM
(Barcelona) 12 Sebt 2019. Lionel Messi ayaa sheegay inuusan wax dhibaato ah ku qabi doonin in miiska cashada uu la fariisto Cristiano Ronaldo, isagoo dhinaca kale tilmaamay in faahfaahinta ku saabsan ku guuleysiga abaal-marinta Ballon d’Or ay markan noqotay arrin layaab leh.
Ronaldo ayaa ku casuumay Lionel Messi inuu la qaato kulan casho ah isaga, maadaama uu yaraaday loolankii ka dhaxeeyay labadooda, kaddib markii uu xiddiga reer Portugal uu ku biiray kooxda Juventus, halka Lio uu wali baaqi ku yahay horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Haddi ay dhacdo in cashadaas ay qabsoonto, waxaan ku tilmaami karnaa inay tahay cashadii qarniga, maadaama ay ku kulmayaan laba shaqsi ee caadeystay inay taariikh ka sameeyaan kubadda cagta, isla markaana soo joogteeyay qaab ciyaareedkooda cajiibka ahaa sannado fog.
Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Sport” gobolka Catalonia ee dalka Spain wuxuu ku sheegay:
“Wax dhibaato ah kuma qabo inaan ogolaado casuumaada Ronaldo, saaxiibo ma ninin, maxaayeelay kuma midoobin qolka dhar badaleshada, aqoon sidaas u dheer nagama dhexeyso, oo aan ka aheyn inaan ku kulano xafladaha abaal-marinada lagu bixiyo”.
“Waxaan ku sheekeysanaa xafladaha, ma aqaano haddii aan kulan casho ah wada qaadan doono, sababa la xiriira duruufaha ku xiran midkeen kan kale, laakiin waan aqbalay casuumadiisa”.
Intaas kaddib Lionel Messi yaa wuxuu ka hadlay abaal-marinta Ballon d’Or wuxuuna yiri:
“Xaalada waxay noqotay mid layaab leh, sababa la xiriira inaan hadda la aqoon qofka ugu cad-cad ee ku guuleysan kara, dhawaanahan natiijooyinka heerka kooxda saamayn ayeey ku laheyd, sidoo kale Champions League-na mararka qaarkood way saamaynayaan maxaa yeelay waa tartan muhiim ah, mararka qaarna koobka adduunka ayaa la tixgaliyaa, mararka qaarna Maya, runtii lama garan karo”.
Wenger oo sharaxay sababta ay Man United ugu guuleysanin hanashada Horyaalka Premier League